Ngwe Su San: ကျွဲကောသီး၏ ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူး ၁၀
ကျွဲကောသီး၏ ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူး ၁၀
ကျွဲကောသီးဟာ Citrus အနွှယ်ဝင်ဖြစ်ပြီး အောက်ပါ အာဟာရတန်ဖိုးနဲ့ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အကျိုးကျေး ဇူးတွေ ပါဝင်နေပါတယ်။ ကျွဲကောသီး တစ်ခွက်စာ (၁၉၀ ဂရမ်)မှာ ပါဝင်တဲ့ ကျန်းမာရေး တန်ဖိုးတွေက ဗီတာမင်စီ (တစ်နေ့တာ လိုအပ်တဲ့ ပမာဏနဲ့ ၁၉၃ ရာခိုင်နှုန်း)၊ ပိုတက်စီယမ် (တစ်နေ့တာ လိုအပ်တဲ့ ပမာ ဏရဲ့ ၁၂ ရာခိုင်နှုန်း)၊ အမျှင်ဓာတ်(တစ်နေ့တာ လိုအပ်တဲ့ ပမာဏရဲ့ ၈ ရာခိုင်နှုန်း) တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။
(၁) ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်မှုကို သက်သာစေပါတယ်
ရေအများအပြား သောက်တာနဲ့ ခရင်မ်ဘယ်ရီဖျော်ရည်သောက်တာတွေက ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်မှုကို တွန်းလှန်နိုင်အောင် ကူညီနိုင်တဲ့ ထိရောက်တဲ့နည်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဗီတာမင်စီအများအပြားပါဝင်တဲ့ ကျွဲကောသီးဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် အတောအတွင်းရောင်ရမ်းမှုကို တွန်းလှန်နိုင်ပါတယ်။ ဗီတာမင်စီက ဆီးလမ်းကြောင်းရှိ ဘက်တီးရီးယား ကြီးထွားပြန့်ပွားမှုကို လျော့ကျစေပြီး ဆီးထဲက အက်စစ်ဂုဏ်သတ္တိကို
(၂) အနာကို မြန်မြန်ကျက်စေပါတယ်
ခွဲစိတ်ကုသမှု ခံယူထားတဲ့အခါ ဗီတာမင်စီများများပါဝင်တဲ့ ကျွဲကောသီးနဲ့ တခြား အချဉ်အရသာရှိတဲ့ သစ်သီးဝလံတွေကို စားသင့်ပါတယ်။ ဗီတာမင်စီဟာ အရေပြားတင်းရင်းစေတဲ့ ကော်လာဂျင်ဖြစ်ပေါ်မှုမှာ ပါဝင်တဲ့ အင်ဇိုင်းအကူဖြစ်သလို အရေပြားရဲ့ဆွဲဆန့်အားကို ကောင်းမွန်စေကာ အနာကျက်မြန်စေပါတယ်။
(၃) သွားနှင့် ခံတွင်းကို ကျန်းမာစေပါတယ်
သွားဖုံးသွေးထွက်တာနဲ့ သွားဆုံးရှုံးတာက ဗီတာမင်စီချို့တဲ့လို့ ဖြစ်ရတဲ့လက္ခဏာတစ်ရပ် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ကော်လာဂျင်က အရေပြားဖြစ်ပေါ်ရေးအတွက် အရေးပါရုံသာမက သွားနဲ့ သွားဖုံးတွေကျန်းမာစေဖို့လည်း တည်ဆောက်ပေးပါတယ်။
(၄) သွေးအားနည်းရောဂါ မဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးပါတယ်
ဗီတာမင်စီဟာ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ သံဓာတ်စုပ်ယူရေးကို ကောင်းမွန်စေတယ်လို့ သိပ္ပံနည်းကျ လေ့လာမှုတွေ အရသိရပါတယ်။ ဒါကြောင့် သံဓာတ်ဖြည့်စွက်ဆေးမှီဝဲနေရင် လိမ္မော်ရည်သောက်ပေးပါ၊ ဒါမှမဟုတ် အသားနဲ့ အတူ ဗီတာမင်စီများစွာ ပါဝင်တဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကို စားပေးပါ။ ဒီအာဟာရဓာတ် နှစ်ခု စလုံးဟာ အူထဲကို တစ်ချိန်တည်း အတူတူ ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။
(၅) အအေးမိတာနဲ့ တုပ်ကွေးမဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးပါတယ်
ဗီတာမင်စီနဲ့ ပဋိပစ္စည်းရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာကို လှုံ့ဆော်ပေးရာမှာ အလွန်အရေးပါသလို ခန္ဓာကိုယ်ထဲ ကို ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့ ဘက်တီးရီးယား၊ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတွေလို ပြင်ပရန်သူတွေကို တွန်းလှန်ပေးနိုင် တဲ့ ကိုယ်ခံအားဆဲလ်တွေကိုလည်း လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အသက်ရှူစနစ်ဆိုင်ရာ ပြဿနာ
တွေ မရအောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်တာပါ။
(၆) သွေးဖိအားကို ထိန်းချုပ်ပေးပါတယ်
ကျွဲကောသီးကို စားသင့်တဲ့ နောက်ထပ်အကြောင်းရင်းတစ်ခုက ပိုတက်စီယမ် ပါဝင်မှု မြင့်မားလို့ပဲဖြစ်ပါ တယ်။ ပိုတက်စီယမ်ဟာ သွေးတိုးတာကို လျော့ကျစေပါတယ်။ ထောပတ်သီး၊ ငှက်ပျောသီးနဲ့ မာလကာသီး တို့ဟာ ပိုတက်စီယမ်ပေါများစွာ ပါဝင်တဲ့ သစ်သီးတချို့ဖြစ်ပါတယ်။
(၇) အရိုးပါးရောဂါ မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးပါတယ်
လေ့လာမှုအရ အစားအသောက်ကနေ ပိုတက်စီယမ် များများရရင် အရိုးသိပ်သည်းဆကို ကောင်းမွန်စေ တယ်လို့သိရပါတယ်။
(၈) ခြေထောက်ကြွက်တက်မှု မဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးပါတယ်
သင်က မကြာခဏ ခြေထောက်ကြွက်တတ်တဲ့ ဝေဒနာဖြစ်တယ်ဆိုရင် သင့်ခန္ဓာကိုယ်က ပိုတက်စီယမ်ကို ပိုမိုလိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့ သဘောပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပိုတက်စီယမ်ဟာ ကြွက်သားဆွဲဆန့်မှုနဲ့ နာ့ဗ်ကြောအချင်း ချင်း ဆက်သွယ်မှုမှာ မရှိမဖြစ် အရေးပါနေပါတယ်။
(၉) အူမကြီးရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာကို ကောင်းမွန်စေပါတယ်
ကျွဲကောသီးမှာ အမျှင်ဓာတ်အများအပြား ပါဝင်ပြီး အူလှုပ်ရှားမှုကို ပုံမှန် ကောင်းမွန်စေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် လိပ်ခေါင်းနဲ့ အူမကြီးကင်ဆာမဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
(၁၀) ကိုယ်အလေးချိန်ကို ထိန်းချုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်
ကျွဲကောသီးမှာ ပါတဲ့ အမျှင်ဓာတ်ဟာ ကိုယ်လေးချိန် ထိန်းချုပ်ရေးမှာ အရေးပါတယ်ဆိုတာ သင်သိပါရဲ့ လား။ အမျှင်ဓာတ် များများပါတဲ့ အစာတွေက အစာအိမ်ထဲမျာ ခပ်ကြာကြာရှိနေပြီး ဗိုက်ပြည့်ဝတဲ့ ခံစား ချက်ကို ရရှိလေလေ ဖြစ်ပြီး အစာကို အလွန်အကြူးမစားမိအောင် ရှောင်ရှားနိုင်လေလေဖြစ်ပါတယ်။ ကျွဲကောသီးဟာ ကယ်လ်စီယမ်နဲ့ ပရိုတင်းပါတဲ့ အသီးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by - ငွေ စုစံ
♦ သင်မှီဝဲရတဲ့ ဆေးဝါးတွေကို ရေအေးနဲ့အတူ မသောက်ပါနဲ့။ ♦ ညနေ ၅ နာရီနောက်ပိုင်း အစာအများကြီး မစားပါနဲ့။ ♦ မနက်ပိုင်းမှာ ရေများများသော...
သင့်ချစ်သူကို ဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်နဲ့ နှင်းဆီပန်း ပေးချင်သလဲ
ကိုယ်ချစ်တဲ့ ချစ်သူမိန်းကလေး၊ ဇနီးမယားတွေကို အမျိုးသားတွေက မွေးနေ့၊ Valentine's Day တွေနဲ့ ချစ်သူသက်တမ်းအထိမ်းအမှတ်နေ့ရက်တေ...
ဆီးထဲ သွေးပါတဲ့အခါ စိတ်ထဲမှာ တုန်လှုပ်ချောက်ချားတဲ့ ခံစံစားချက်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ဆီးထဲသွေးပါတဲ့ အခြေအနေအများစုဟာ ကုသလို့ရတဲ့ အြေ...
ခရမ်းချဉ်သီးစားခြင်းက ဆီးကျိတ်ရောဂါရှင်များကို ဝေဒနာ ကိုးဆ သက်သာစေနိုင်
ခရမ်းချဉ်သီး အား အနီရောင်ဖြစ်စေသည့် အင်တီအောက် ဆီးဒင့် လိုင်ကိုပင်းသည် သက်ကြီးအမျိုးသားများတွင် ဖြစ် တတ်သည့် ဆီးကျိတ်ကြီးခြင်းနှင်...
အသက်လေးလမတိုင်မီနှင့် ခြောက်လကျော်ချိန်တွင်မှ - ဖြည့်စွက်စာစတင်ကျွေးသည့် ကလေးများ အမျိုးအစား(၁) ဆီးချိုရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေမြင့်မား
ကလေးငယ်များကို ဖြည့်စွက်စာ စောစီးစွာစတင်ကျွေးခြင်း နှင့် နောက်ကျမှ ကျွေးခြင်းတို့သည် ကိုယ်ခံအား စနစ်တွင် ပါဝင်သောဆဲလ်များ ဖောက်ပြန်မ...
ပဒူကောင်အကိုက်ခံရတာက အလွန်အမင်း နာကျင်တဲ့ ဝေဒနာကို ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အပြင် နောက်ပိုင်းကာလ မှာနာတာရှည် ထိခိုက်မှုကို ဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ လူအများစ...
ကျန်းမာရေး ဆောင်းပါး အလှအပ အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး အမျိုးသားကျန်းမာရေး အမျိုးသမီးအလှအပ အထွေထွေ ကလေးကျန်းမာရေး လူကြီးကျန်းမာရေး အမျိုးသားအလှအပ ကဗျာ ၀တ္တု
► March 15 (7)
► November 24 (11)
► September 1 (9)
► August 25 (17)
► July 28 (14)
► July7(6)
► June 16 (17)
► June2(12)
ကျန်းမာစေရန် နေ့စဉ် လိုက်နာသင့်သော နည်းလမ်းကောင်း ...
သင့်နှလုံး ကျန်းမာရေးကို ကောင်းမွန်စေသော အပြုသဘောေ...
ခန္ဓာကိုယ်သွယ်လျစေရန် နမ်းရှူသင့်သော အစာ ငါးမျိုး
အမျိုးသားတို့ သိထားသင့်သော မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းမ...
ရေခဲတုံး၏ အံ့အားသင့်ဖွယ်ရာ အသုံးဝင်ပုံများ
အိပ်စက်မှု ပြဿနာ ဖြစ်စေသော အကျင့်ဆိုးများ
သင့်ကလေး အိပ်ရာထဲ ဆီးသွားခြင်းဆိုင်ရာ အယူအဆများ
လူ့ခန္ဓာကိုယ်အကြောင်း စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ အချက်များ
အပျင်းကြီးသော မိန်းကလေးတို့ အတွက် ဗိုက်သားချပ်ရပ်ေ...
လျော့ရဲနေသော အရေပြား တင်းရင်းလှပစေမည့် သဘာဝနည်းမျာ...
Did You Know ? ( ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း )
သင့်အ၀တ်ဗီရိုက ပြောပြနေသော သင့်အကြောင်း
► May5(10)
► April 28 (17)
► April 21 (13)
► April7(9)
► March 24 (13)
► November 18 (21)
ငွေစုစံ ဘလော့လေးကို လာရောက်အားပေးကြသူအားလုံး ကိုယ်စိတ်နှလုံးရွှင်လန်းကြပြီး ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ Thank You
Copyright © 2013 - 2014. Created by hwy. Theme images by Ollustrator. Powered by Blogger.